Mail Butler: Farany, mpanampy an'ny Apple Mail izay mikororoka! | Martech Zone
Mail Butler: Farany, mpanampy an'ny Apple Mail izay mikororoka!
Alarobia, Oktobra 12, 2016 Alarobia, Oktobra 12, 2016 Douglas Karr
Rehefa manoratra an'ity aho dia mandefa mailaka izao helo. Manana mailaka 1,021 100 mbola tsy voavaky aho ary ny tsy valinteniko dia mihazakazaka amin'ny hafatra mivantana amin'ny alàlan'ny media sosialy, antso an-tariby, ary hafatra an-tsoratra. Mandefa mailaka 200 eo ho eo aho ary mahazo mailaka XNUMX eo isan'andro. Ary tsy ao anatin'izany ny famandrihana amin'ny takelaka tiako izay. Tsy voafehy ny boaty fampidirana ahy ary boaty aotra dia zava-misy amiko toy ny dinosaury mavokely.
Nampiasako fitaovana iray taonina hanampiana ahy ary diso fanantenana foana aho, nanipy azy rehetra ary niverina tany amin'ny Apple Mail izay ny sainam-pireneny, ny sivana ary ny lisitra VIP dia rantsan-tànana ampiasaiko hametahana ilay tohodrano. Tsy ampy anefa izany. Mbola kivy aho. Te hitantana tsara kokoa ny onjan'ny fangatahana aho. Ary fantatro fa isaky ny mailaka an-jatony vitsivitsy dia misy foana ny fanararaotana mety ho an'ny mpivady izay tokony ho lohako.
Tokony ho herinandro lasa izay, Thaddeus Rex, a marika manam-pahaizana izay miara-miasa aminay amin'ny mpanjifa izay mety nahita na tsy nahita ahy nitomany miharihary teo anoloan'ny boaty, alefaso amiko izany Mail Butler. Tsy toy ny sehatra antoko fahatelo izay manara-maso na mandray ny boaty fampidirana anao, MailAndler dia add-on izay mitambatra tsy tapaka miaraka amin'ny Apple Mail. Tena tsara fa Apple dia tokony hanafoana ity orinasa ity fotsiny ary manampy ireo endri-javatra ireo amin'ny alàlan'ny default.
Endri-javatra Mail Mailler
Matory - Amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana mailaka dia hataonao mandalo azy vetivety ao anaty Inbox anao.
Tracking - Ampahafantaro anao raha nanokatra ny mailaka anao ilay nahazo anao. Ity dia fitaovana mahafinaritra ho an'ny matihanina amin'ny fampandrosoana orinasa mahita raha misy ny vinavina manokatra ny mailaka intro na tolo-kevitr'izy ireo.
fandaharam-potoana - Alaharo ny mailakao handefasana amin'ny daty sy ora voatokana amin'ny ho avy.
Hamafa ny fandefasana - Mandritra ny fotoana fohy dia azonao atao ny manafoana ny fandefasana ny mailaka ary hahitsy ireo lesoka mety hitranga.
sonia - mamorona sonia mailaka tsara amin'ny fisafidianana ny modely isan-karazany.
Cloud Upload - Mailbutler dia mampakatra ho azy eo amin'ny rahona ny fametahana rakitra be dia be ary manampy ireo rohy mifanaraka amin'ny hafatrao.
Ampahatsiahivina fampidirana - Aza adino velively ny mampiditra rakitra amina hafatra iray izay notononinao tao amin'ny fandefasana hafatra.
Sary Avatar - Miaraka amin'i Mailbutler ny mpandefa mailaka dia ho tsikaritra mora foana amin'ny sary avatar miloko.
Inbox mivantana - Midira ny boaty mailaka fampiasanao matetika indrindra, avy eo amin'ny bisy menio - tsindrio iray monja miala amin'ny toerana rehetra
Emojis - Ireo kisary kely mahafatifaty izay ao anatin'ny fifandraisana maoderina… ankehitriny amin'ny mailaka ihany koa.
Unsubscribe - MailForler dia manamora kokoa noho ny teo aloha ny tsy fisoratana anarana amin'ny takelaka ilaina: Click iray!
Ity misy sary kely azo tsorina momba nyMail Butler miasa ny fandaharam-potoana. Ny iray amin'ireo fiasa tiako dia ny fitazonana ny toerana farany misy ahy - toy izany koa aho Andro fiasana manaraka amin'ny 8:00 maraina. Tena tsara izany satria tsy dia miraharaha ireo olona mahita aho fa mamaly ny mailak'izy ireo amin'ny 2:48 maraina, heh.
Manasongadina ho avy Mail Mailler
asa - Mariho ny mailakao ho toy ny zavatra tokony hatao mba tsy hanadino ireo asa lehibe indray.
Fiatoana inbox - Mialà sasatra, ataovy Mail Butler: Esory ho azy ny kaonty mailaka sasany miankina amin'ny ora fiasanao.
Quote - Mizarà haingana ny teny avy amina mailaka amina fampiharana na serivisy hafa.
Giphy - Miaraka amin'ny Mailbutler dia manana fidirana mivantana amin'ireo sary mihetsika trazillion ianao hanehoana tsara ny tenanao.
Ampidiro MAIMAIMPOANA ny Mail Butler!
Tena faly aho fa Mail Butler manana ny Fiatoana inbox endri-javatra eo am-pandrosoana. Imbetsaka isika no mahazo mailaka alina amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny fangatahana faingana. Tsy hoe tsy te hamaly isika, fa matetika mampiofana ny mpanjifanay fa afaka mifandray amin'izy ireo izahay amin'ny andro sy ny alina… tsy fomba fanao satria tsy departemanta mpanohana izahay. Aleoko mijanona tsy mandray mailaka mandra-pahatongan'ny andro fiasana manaraka. Ireo mpanjifanay izay mety misy vonjy maika dia afaka miantso anay foana.
Fampahafantarana: Mampiasa ny rohy fandefasako ao amin'ilay paositra aho amin'ny fanantenako fa taonina iray no hametraka sy handoa ny serivisy ary azoko maimaim-poana izany! 🙂
Tags: paoma paomarahona paoma rahonapaoma emojiisfandaharana paoma paomafanarahana mailaka paomapaoma paiso tsy hisoratra anaranamailakaboaty aotraMailmailbutler
1WorldSync: Fampahalalana azo antoka momba ny vokatra sy fitantanana data
AdCat: Topi-maso, mandamina, manova ary manatsara ny sary doka momba ny haino aman-jery sosialy